मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयले ६ महिनापछि पायो उपकुलपति
सुर्खेत - सुर्खेतमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयले ६ महिनापछि उपकुलपति पाएको छ। विश्वविद्यालयका कुलपति एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले (फागुन १९ गते) नियुक्त गरेका उपकुलपति प्राध्यापक डा. नन्दबहादुर सिंहले बिहीबार पदभार ग्रहण गरेका छन्।
उपकुलपति सिंहले विश्वविद्यालयलाई चार वर्षमै देशकै उत्कृष्ट विश्वविद्यालय बनाउने बताएका छन्। जनताकै आन्दोलनको बलमा विश्वविद्यालय स्थापना भएको स्मरण गर्दै सिंहले जनताको लगानी जुटाउँदै जनताकै विश्वविद्यालय बनाउने प्रतिबद्धता जनाए। सिंहले भने, ‘यो जनताको आन्दोलनबाट स्थापना भएको विश्वविद्यालय हो, यसलाई जनताकै विश्वविद्यालय बनाउनुपर्छ। जनताका छोराछोरी पढ्ने विश्वविद्यालयमा सरकारको बजेट र अनुदानमात्र नभई जनताकै लगानी जुटाउनु आवश्यक छ।’
कर्णालीको गरिबी र भोकमरीको समस्यालाई अन्त्य गर्नेगरी विश्वविद्यालयले जनशक्ति उत्पादन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए। कर्णाली जडिबुटीको भण्डार भएको उल्लेख गर्दै उनले विश्वविद्यालयले मेडिकल कलेज स्थापना गरेर यसको लाभ लिन सक्ने बताए।
सिंहले काम नगर्ने तर विल मिलाएर भ्रष्टचार गर्ने कर्मचारी विश्वविद्यालयलाई स्विकार्य नहुने तर्क गरे। भर्खरै बामे सर्न लागेको विश्वविद्यालयलाई थप उचाईमा पुर्‍याउन सबैपक्षसँग सहकार्य गर्ने धारणा उनले व्यक्त गरे। चार वर्षे कार्यकालमा विश्वविद्यालयलाई छोरा जस्तै गरी हुर्काउने उपकुलपतिको प्रतिबद्धता थियो।
गत असोज ६ गते तत्कालिन उपकुलपति प्रा.डा. उपेन्द्रकुमार कोइरालाको कार्यअवधि सकिएको थियो। त्यसयता विश्वविद्यालयमा उपकुलपति नियुक्त हुन सकेको थिएन। तर, सरकारले अर्को व्यवस्था नहुन्जेलसम्मका लागि विश्वविद्यालयकै व्यवस्थापन संकायका डीन डा.मस्तबहादुर गरंजालाई निमित्त उपकुलपतिको रुपमा नियुक्त गरेको थियो। उपकुलपति नहुँदा विश्वविद्यालय निमित्तको भरमा सञ्चालन हुँदै आएको थियो।
कालिकोट स्थायी घरभएका सिंह २५ वर्ष त्रिभुवन विश्वविद्यालयको प्राध्यापक रहेका थिए। सिंहले टोकियो विश्वविद्यालयबाट सन् २००२ मा पीएचडी गरेका हुन्। नवनियुक्त उपकुलपति नेकपा (पूर्वएमाले) निकट हुन्। डा.उषा झा नेतृत्वको सर्च कमिटीले केही महिना अगाडि प्रधानमन्त्रीलाई विश्वविद्यालयको उपकुलपतिका लागि गरेको सिफारिशका आधारमा सिंह उपकुलपति नियुक्त भएका हुन्।